“सबैभन्दा डर त बूढि कै लाग्छ” – जय देबकोटा
नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रमा एउटा स्थापित नाम जय देबकोटा । धेरै जसो स्टुडियो र स्टेज कार्यक्रममा नै व्यस्त रहने यि गायकको स्वरमा मन्त्र मुग्ध हुने गर्दछन नेपाली लोक दोहोरीका फ्यानहरु । तिनै लोक प्रिय गायक जय देबकोटा संग फिल्मीजुम डट कमकी सिता रेग्मी ले गरेको कुराकानी –
कतिको स्वस्थ अनि व्यस्त हुनुहुन्छ ?
तिज लागिरहेको छ अहिले धेरै गितहरु गाए यो पल्ट चाहि अब दशैको गित रेकर्डिङ हुदैछ साथिरुको पनि मेरो पनि रेकर्ड हुदैछ ।
२०७५ सालमा कति वटा गित रेकर्ड गर्नू भा छ विशेष गरेर तिजको ?
मेरो आफ्नै चाहिँ १/२ वटा मात्रै थियो तर अरु सबैको गरेर ९ वटा चाहिँ गाए।
अहिले तपाइले गाउनुभएको गित रक्सी खान जाम एकदमै हिट भएको छ, सबैले रुचाउनु भएको छ,गितले भन्न खोजेको कुरा रिलमा मात्रै हो की रियलमा पनि लागु हुने हो ? विशेष गरेर हजुरकोमा चाहिँँ?
खास भन्नु पर्दा रियलमा चाहिँ म रक्सी खादिन,आजसम्म खाएको छैन पछि के हून्छ भन्न सकिन्न ,सबैलाइ डर लाग्ने बूढिको हो पारिवारिक डर हुन्छ नि त तै भएर बुढी नभाको बेलामा साथि भाइहरुसँग ल है रक्सी खान जाम भनेर सबैको कथा हामिले निकाल्न खोजेका हौँ।
अनि स्टेज प्रोगाममा कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ तिज लागिराछ ?
तिजको स्टेज प्रोगाम भन्नुपर्दा काठमाडौ भ्यालि बाहिर चाहि भ्याइन भ्यालि भित्रै बाकि छ ३÷४ वटा प्रोगाम त, भर्खर त तिज सूरु हुन लाग्यो अब।
तपाइले विशेष गरेर तिजको गित निकाल्नु भा छ अहिले, दशैँतिहारको गित, नेपालि विदेशिदाको पिडा बोकेको गित अनि सेन्टिमेन्टल गित सबै निकाल्नु भाछ,यसरि सबे विधालाइ समेटेर गित रचना गर्न कसरि आउछ?
मैले लेखेका गितहरु गाएका गितहरु एकदम टिपिकल लोकपन झल्किने बनाको हुन्छु, आफ्नो मात्रै पिडा नभएर अरुको पिडालाइ पनि लिएर सिर्जना गर्छु, या हरु सबैले मन पराइदिनु भा छ।
गित सिर्जना गर्दा यथार्थपरक हून्छ कि देखे/सुनेका आधारमा गर्नहुन्छ?
धेरैजसो काल्पनिक हुन्छ,केहि केहि देखेको पनि उतारेको छु ।
दारि पाल्नु भा छ दारिभित्रको मायाको घारिले हो कि भर्खर भर्खरै विवाह पनि गर्नु भा छ,लभ म्यारिज कि एरेन्ज म्यारिज हो नि ?
दुबैजसो हो लभ पनि परेको अनि घरबाट पनि कुरा गरेको।
गितसंगितको क्षेत्रमा धेरै सफलता हात पारिसक्नु भयो,अहिले सम्म कतिवटा एल्वम निकाल्नु भयो ?
लगभग ६०० क्रस भयो होला मैले गाएका गितहरु र आफैले गाएको,आफैले बनाएको वा आफ्नो रचना ३०० क्रश भयो।
तपाइलाइ अहिलेसम्म आफुले गाएको गितमद्दे सबैभन्दा बढि सन्तुष्ट लागेको कूनै त्यस्तो गित छ ?
आफुले गाएको सबैगित राम्रो लाग्छ,माया लाग्छ।अहिले पछिल्लो समयमा २ वटा टिपिकल गित बजारमा ल्याएको थिए। एउटा जुनकिरि अनि अर्को बर्खा लाएछ क्यारे भन्ने, मेरो आफ्नै युटुव च्यानलबाट बजारमा गा छ,सबैले रुचाउनु भाको छ ।
आफुले कत्तिको संघर्ष गरेर यो ठाउसम्म आइपुगे जस्तो लाग्छ,कत्रिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो कामप्रति पेसाप्रति ?
म धेरै माथिल्लो तहमा त पुगेको छैन, संघर्ष गर्दै छु मलाइ सन्तुष्ट छ मेरो प्याटनमा चाहि मैले लोक गित लोक भाका टिपिकल खालको गाउघरमा घटने घटनालाइ प्रस्तुत गरिरहेको छु अझै यस्ते गित निकाल्न अनि जय देवकोटालाइ चिनाउन चाहन्छु यहाहरुले मेरो गितलाइ युटुवमा गएर जय देबकोटा हान्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ, जे होस मलाइ एकदमै सन्तुष्ट छ ।
गितसंगितको दौडानमा लागिरहनु भएको छ अब भविश्यमा के गर्ने विचार छ ?
म यो गितसंगितमै हुन्छु, लोक गायक जय देवकोट भनेर चिन्ने जति नेपालि हुनुहुन्छ उहाहरुले एकदिन जय देवकोटा भनेर चिन्नु होस त्यो नै मेरो लक्ष हो ।
तपाइका फ्यान फलोअर्स पनि धेरै हुनुहुन्छ,उहाहरुले तपाइको गित सुन्न चाहेमा वा तपाइमाझ जोडिन चाहेमा कसरि जोडिने ?
मेरो फेसवुक पेज जय देवकोटा छ जय देवकोटा हान्नु भयो भने युटुवमा पनि हेर्न पाउनु हुन्छ,अन्य च्यानलमा पनि धेरै गित गएका छन,वाइ जय देवकोटा हान्नुभयो भने हेर्न सक्नुहून्छ र मेरो स्टुडियो तरङगमा पनि आउन सक्नुहुन्छ । उहाहरुलाइ गित रेकर्ड गर्न परेमा मलाइ ९८५१२०२१२४ मा सम्पर्ग गर्न सक्नुहुन्छ ।
मिस यूनिभर्स टप १० मा पर्न सफल मनिता देवकोटालाई स्वागत गर्न शृंखला लगायत मिस नेपालका सुन्दरीहरु मध्यरातमा एयरपोर्ट
परिवार सहित पहिलो पटक मिडियामा द भोइस अफ नेपालका फाइनलिस्ट सप्तक दुतराज – बजेता नहुनुको खुल्यो यस्तो रहस्य
२ वटा बिषयमा डिग्री गरेकी तर बेल्ली डान्समा सबैलाई झुमाउछिन् ( भिडियो अन्तर्वाता )